‘यस्तो गा’ली ग’लौजमा उत्रिनु भनेको अ’पराध नै हो’- नायिका पुजा शर्मा – Sanchar Patrika
‘यस्तो गा’ली ग’लौजमा उत्रिनु भनेको अ’पराध नै हो’- नायिका पुजा शर्मा
July 11, 2020 379
काठमाण्डौं। दिपाश्री निरौलाले एक अन्तरबार्तामा दिएको महानायक अभिव्यक्ति वि’वाद यतिबेला चरम उत्कर्समा पुगेको छ । यहाँ सम्मकी सामाजिक संजालमा दिपाश्रीलाई अʼश्लील तथा तल्लो स्तरमा गा’ली ग’लौज गर्नेहरुको लहर चलेको छ । यता दिपाश्री निरौलाई डि’प्रेसनको सि’कार भैसकेको निर्माता अशोक शर्माको एक स्ट्याटसले बताउछ । चर्को बिʼरोध भएपछि कलाकारहरू बिʼरोध गर्नेहरुकै समर्थन गर्दै दिपालाई सकाʼरात्मक ढङ्गले सुझाव दिन आग्रह गर्न थालेका छन् ।
आज सनिवार केकि अधिकारी, प्रीयंका कार्कीले बिʼरोध गर्नेको समर्थन गर्दै दिपालाई सकाराʼत्मक ढङ्गले सम्झाउन अनुरोध गरेका छन् । यस्तै नायिका पुजा शर्माले पनि एक स्ट्याटस लेखेकि छन । उनले ‘समर्थन र बि’रोध भनेको जिवनमा एक हिसाबले चाहिने कुरा नै हो’ तर मान्छेको मनोबिʼज्ञानमै असर गर्ने तवरले यसरी बिʼरोध गर्न कसैलाई छुट नभएको लेखेकी छन् ।
नेपालमा को’रोना म’हामारी सुरु भएसंगै सुरु भएको लकडाउनले सिनेमा नगरिमा धेरै उथलपुथल ल्यायो । फिल्म छायांकन हुन पाएन, रिलिज हुन पाएन, प्रोमोसन गर्न पाएन, यी र यस्ता कुरा त छदै छ तर नका’रात्मकताको चर्चाले सिने नगरीको बाट कता ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । यो लकडाउनको अʼ बधिमा धेरै झन्डै आधा दर्जʼन कलाकारहरू विʼवादको भुʼमरिमा फ’से ।
सम्भवत यो छोटो अबधीमा यति धेरै कलाकारहरु एकसाथ विʼवादमा आएको नेपाली सिने उधोगमा पहिलो पटक हुनसक्छ । केही विवादहरु बिस्तारै सेलाउदै गएपनी दिपाश्री निरौलाको विवा’द भने सेलाउने छाटकाट देखिएको छैन ।
सेलेब्रेटिकै एक पछि अर्को स्ट्याटसका काʼरण पनि उनी माथी नकाʼरात्मक प्रतिक्रिया जनाउनेहरुको जमात झनै बढेर गएको सामाजिक संजालमा देख्न सकिन्छ । दिपाको समर्थनमा स्ट्याटस लेख्यो भने त लेख्ने ब्यक्तीकै बि’रोध हुन थाल्छ । यता बिरोध गर्नेकै सपोर्ट गर्दै कुनै कलाकारले दिपालाई सम्झाउदै स्ट्याटस लेख्यो भने पनि बि’रोध गर्नेको क्रम रोकिदैन । महानायक वि’वादमा फʼसेकी दिपालाई यतिबेला सबैको साथ र समर्थनको आवस्यकता चाहिएको छ । ग’ल्ती महसुस गर्दै माफी मागीसक्दा पनि यति धेरै तल्लो स्तरको गा’ली, बिʼरोध र आ’लोचना गरिनु अमाʼनवीय हो ।
हेर्नुस् उनको स्ट्याटस जस्ताको त्यस्तै ।
Prevअ’वैध रुपमा मृगौला प्र’त्यारोपण गरेको अ’भियोग भरतपुर मेडिकल कलेजका चार डाक्टर प’क्राउ
Nextएक मिसकलले जुर्‍यो बिहे, ६० वर्षीया बेहुलीलाई २० बर्षे दुलाहा
अचम्म ! ठूलो प्लास्टिकको झोला भित्र बसेर बाढीमा वारपार
यी हुन् काठमाडौंमा सञ्चालन गर्न पाइने सेवाहरू
वनपालेकी छोरी बिमिता यसरी बनिन् ‘वाइल्ड-लाइफ’ फोटोग्राफर
दुर्गेशलाई गायिका आस्था राततको व्यंग्य,”युट्यूबबाट डलर त आउला, तर सांगीतिक ज्ञान कहाँबाट छाउला”